Kenya: gargaar bani’aadamnimo oo degdeg ah ayay u baahan yihiin qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool bannaanka xerada Dhagaxley - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Kenya: gargaar bani’aadamnimo oo degdeg ah ayay u baahan yihiin qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool bannaanka xerada Dhagaxley
28.12.2010 | Keyna, Xeradda qoxootiga ee Dadaab
Ugu yaraan 700 qoysas Soomaaliyeed ah oo ka soo cararey dagaalka Soomaaliya ayaa hadda ay soo wajaheen xaalado nololeed oo aan la aqbali karin oo ku haysta degsiimooyin dhaqso u sameysmey oo ku yaalla bannaanka xerada dadku ku fara badan yihiin ee Dhagaxley ee dalka Kenya. Xilli-roobaadka oo hadda uun bilowdey, ayaa xaaladdooda ka sii dhigeya mid aan degganeyn. Médecins Sans Frontières (MSF) ayaa ugu baaqeysa maamulka Kenya iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha gargaarka in ay gaaraan heshiis lagu hubinayo in la helo gargaar bani’aadamnimo oo ku habboon.
Jineva/Nayroobi –“Boqollaal qoys ayaa afartii bilood ee la soo dhaafey ku noolaa hoy ku-meelgaar ah oo ay ka sameysteen dhul aan cidina lahayn, iyaga oo sugaya in loo wareejiyo xero rasmi ah” ayaa ay tiri Joke Van Peteghem, oo ah Madaxa ergada MSF ee Kenya. “Qaxootigan ayaa aad ugu baahan gargaar marka la eego dhibaatooyinka haysta. Iyada oo xilli-roobaadkii uu hadda bilowdey, ayaa ay khasab tahay in aan hadda hawsha ku dhaqaaqno”.
Roobabka xooggan ee 48-dii saacadood ee la soo dhaafey ka da’ayey Dhagaxley ayaa biyo ku fatahiyey degaanka ay qoysaskani deggan yihiin, taas oo uga sii dartey xaaladaha nololeed ee adag ee ay ku sugan yihiin kuwa aan hoy ka helin gudaha xerada qaxootiga. Bil kasta, kumanaan qaxooti ah, oo qaar badan oo ka mid ahi ay yihiin haween iyo carruur ka soo cararey dagaalka Soomaaliya, ayaa u soo gudbaya xuduudda dhinaca Kenya ka dib marka ay soo galaan safar lug ah. Maanta, waxaa aad ugu yar cuntada, biyaha, fayadhowr iyo hoy ku filan halka xerada qaxootigu ay ka tahay mid ay dadku aad isu dul-saaran yihiin oo aaney aqbali karin dad kale. In kasta oo ay jirto goob loo cayimey qaxootiga cusub, haddana waxaa lala daahey in dad halkaas la geeyo.
Si ay arrintaas wax uga qabato, ayaa Médecins Sans Frontières waxa ay baaritaan caafimaad oo degdeg ah ay ku sameysey qaxootiga iyada oo dadka u baahan daryeel aafimaad u gudbineysa tas-hiilaadka/xarumaha caafimaadka. MSF ayaa sidoo kale agab laga sameysto hoy siisey 700 qoys waxaana iyada oo dad kale kaashaneysa hubisey in biyo ay helaan dadkaas.
Haddana, maaddaama aaney xerada hadda jirta qaadi karin qaxootiga Soomaaliyeed ee sida joogtada ah uga soo cararaya dalka ay dagaalladu halakeeyeen, ayaa ururka caafimaadka ee caalamiga ah waxaa uu bixinayaa digniin. “Waxa ay naga taagan tahay halkii ugu dambeysey. In kasta oo aanu baco fidsan u qaybinney qoysaska qaxootiga cusub ah, haddana uma dhowa kuwo ku filan baahida jirta, gaar ahaan markan oo uu xilli-roobaadkii bilowdey. Waxa aannu madaxda Kenya iyo kuwa ka shaqeeya gargaarka ugu baaqeynaa in ay si dhakhso ah u fududeeyaan in dadkaan si degdeg ah loogu wareejiyo hoy ku habboon,” ayaa ay ku soo gabagabeysey Joke Van Peteghem.
Mashruuca MSF ee Dhegaxleey
Dhagaxley waa mid ka mid ah saddexda xero ee Dhadhaab, Kenya, ee la sameeyey horraantii 1990-maadkii si loo dejiyo qaxootiga Soomaaliyeed. Xerooyinkii markii hore loo dhisey in ay qaadaan 90,000 qof ayaa hadda la ciirciiraya ku dhowaad 300,000 qof. MSF waxa ay xerada Dhagaxley shaqo ka bilowdey bishii Maarso 2009kii halkaas oo cusbitaal 100 sariirood qaada daryeel caafimaad oo ay ka mid yihiin qalliin iyo adeegyada caafimaadka hooyada, ay ku siiso in ka badan 600 bukaan oo la aqbalo bil kasta. Afarta xarumaha caafimaadka ee MSF ah waxa ay tallaal, daryeelka caafimaadka ee ka horreeya dhalmada iyo daryeelka caafimaadka dhimmirka ay siiyaan celcelis gaaraya 10,000 bukaan oo lala taliyo bil kasta.
Tags: Daadad, dadaab, Dhegaxleey, xero-qoxooti